Puntland oo War kasoo saartay Wasiir lagu dhaawacay Boosaaso | Faafan News
Puntland oo War kasoo saartay Wasiir lagu dhaawacay Boosaaso
Maamulka Puntland gaar ahaan Taliska Ciidanka Booliska Maamulka ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay ciidan ka tirsan Puntland oo magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari ku dhaawacay Wasiiru Dowlaha Dekedaha Puntland.
Wasiirka ayaa lagu dhaawacay Waddada Gaaca ee magaalada Boosaaso, gelinkii dambe ee shalay, waxaana dhaawacay Askari la sheegay inuu muran dhexmaray, kaasi oo ku saabsan wado marista oo aad ciriiri u aheyd.
Taliye ku xigeenka Booliska Gobolka Bari ee Puntland ayaa sheegay in ay gacanta ku hayaan Askariga dhaawaca u geystay Wasiir Axmed Siciid, sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen rag kale oo isaga la socday.
Waxa ay sheegeen saraakiisha Ciidanka Puntland in ay sharciga horgeynayaan raga falkan ka dambeeyay, si cadaaladda loo marsiiyo, hadana ay ku jiraan gacanta Hay’adaha ammaanka.
Wasiir Wasiir Axmed Siciid ayaa lagu dabiibayaa Isbitaal ku yaalla magaalada Boosaaso, waxaana la soo sheegayaa in xaaladiisa caafimaad ay soo hagaageyso.
Falalka muranka Wadooyinka la xiriira ayaa maalmahan jiray, dhawaan Magaalada Garowe muran is fahan waa ah oo ku saabsan ciriiriga wadada ayaa waxaa ugu dhaawacmay ku dhawaad Saddex qof.